Madaxweyne Farmaajo ma ka qaybgalayaa shirka berri? | puntlandi.com
Magaalada Qaahira ee Caasimadda Dalka Masar ayaa Isniinta berri ah waxaa ka furmaya shir ku saabsan la-dagaallanka argagixisada iyo xagjirka,kaasoo looga arrinsanayo sidii waddamada Carabtu u midayn lahaayeen dagaalka lagu cirib-tirayo ururrada argagixisada ah ka jira Bariga Dhexe.
Shirkaan oo ka qabsoomaya xarunta Jaamacadda Carabta ee magaalada Qaahira ayaa daba socda shirar hore oo ay Jaacadda carabta iyo khubaro caalami ah iska kaashadeen,kuwaasoo lagu gorfeeyey sida ugu fudud ee looga adkaan karo afkaarta ku dhisan dalka iyo is-qarxinta ee ku sii baahaysa dalalka Carabta.
Mas’uul sare oo ka tirsan Ururka Jaamacadda carabta ayaa sheegay in shirka berri uu diiradda saarayo dhinacyada ay tahay in laga maro dagaalka lagu cirib-tirayo ururrada argagixisada ah,sida in lagula dagaallamo dhinacyada wacyi-gelinta,warbaahinta iyo baraha bulshada oo ay aad uga faafto afkaarta xagjirka ah.
Shirka Isniinta berri ah ayaa la filayaa in uu ka qayb galo Madaxweynaha Soomaaliya Maxammed cabdullaahi farmaajo oo haatan ku sugan dalka Masar,iyadoo Soomaaliya ay kamid tahay dalalka dhibaatada ba’an ka haysato kooxo argagixiso ah oo markii hore afkaartooda kala yimid dhinaca carabta gaar ahaanna Sacuudiga iyo yemen.